Italy Archive - Gool FM - page 3	twitter
Gerard Deulofeu oo kusoo noqday xulka Spain ku dhowaad 3 sano kaddib (Arag laacibiinta la magacaabay)
(Milano) 18 Maarso 2017 – Garab-weerarka AC Milan ee Gerard Deulofeu ayaa loogu yeerey xulka qaranka Spain kaddib ku dhowaad 3 sano oo uu ka maqnaa kaddib markii uu mar kale noqday laacib muhim ah sida uu yiri macallinkiisu.
Deulofeu ayaa lagu daray xulka qaranka La Roja ee isreebreebka Koobka Adduunka 2018 ku wajihi doona Yuhuudda, kaddibna Faransiiska oo ay ciyaar saaxiibtinimo la dheeli doonaan.
Weerarkii hore ee Everton ayaan lagu soo darin xulka Spain tan iyo markii uu kulan-bilowgiisii u saftay 
Inter Milan oo diyaar u ah inay Antonio Conte u gacan galiso labo laab mushaarka uu ka qaato Chelsea
(London) 18 Mar 2017. Naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la warinayaa inay diyaar u tahay in Antonio Conte mushaar ahaan sanadkiiba u siiso 13-milyan oo bound labo jibaar mushaarka uu iminka ka qaato Chelsea.
Maalqabeenada saamiga ugu badan ku leh Inter Milan ayaa u arka macallinka reer Talyaani mid muhiim u ah mashruucooda dib u dhiska kooxda.
Waxayna diyaar u yihiin inay ka dhigaan mid ka mid ah tababarayaasha ugu mushaarka badan kubbada cagta adduunka iyagoo labo laabaya mushaarka uu 
Ibrahimovic oo kashifay wax uu Galliani ku sameeyay funaanadda Inter!!
(Milano) 17 Maarso 2017 – Zlatan Ibrahimovic ayaa daboolka ka qaaday in Adriano Galliani uu baajka Scudetto-ha gacantiisa uga soo jeexay funaanadda Inter Milan isagoo ku dhejiyay midda AC Milan.
Qannaaskan reer Swedish ayaa Rossoneri ku biiray isagoo Barcelona uga yimi xagaagii 2010-kii, isagoo kula guulaystey Scudetto sanadkiisii 1-aad.
“Qosykaygu aad bay ugu faraxsanaayeen Milan,” ayuu Ibrahimovic u sheegay hilinka Fox Sports.
“Waxana la hadlay Galliani iyo [madaxwayne Silvio] Berlusconi waxayna iga dhaadhiciyeen inaan iyaga kusoo biiro iyagoo i siiyey dhiirre gelin micne 
IIB ISKA DABA-WAREEG AH: Qorshihii iibka AC Milan oo qarka u saaran in uu burburo!
(Milano) 17 Maarso 2917 – Wararka haatan soo baxaya ayaa sheegaya in dalladda Chinese-ka ah ee iibsan lahayd AC Milan ee Sino-Europe Sports ay ku tala jirto inay gebi ahaanba ka baxdo iibka daba dheeraad ee AC Milan.
Maamulka Milan ayaa SES ka dhowraya inay bixiyaan €100m oo kale si loo dhamaystiro iibka, balse La Repubblica ayaa sheegaya in dalladdu ay ka baaraan degeyso inay beeca oo idil ka baxdo.
Bixinta lacagtan oo ah middii 3-aad ayaa waxaa ku adkaysanaya maamulka Milan 
Juventus oo ka hadashay dhaawaca Medhi Benatia
(Torino) 17 Maarso 2017 Kooxda Juventus ayaa ka hadashay dhaawaca daafacooda reer Morocco ee Medhi Benatia kaas oo ku dhaawacmay kulankii ay 1-0 uga adkaadeen kooxda FC Porto.
Baaritaanadii lagu sameeyay 29 jirkaan ayaa lagu ogaaday in jug fudud ay ka soo gaartay dhanka bowdada midig mana ahan dhaawac culus.
Juventus ayaa sheegtay in si maalinle ah loola socon doono xaalka Medhi Benatia, wuxuuna mari doonaa baaritaano dheeraad ah isbuuca soo socda sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday kooxda reer talyaani.
Waxaana la xaqiijiyay in Medhi 
”Juventus way anfacaysaa Corentin Tolisso” – Didier Deschamps
(Paris) 16 Maarso 2017 – Macallinka xulka Faransiiska ee Didier Deschamps ayaa wax ka yiri aayaha laacibka Corentin Tolisso oo la hadal hayo inuu xagaaga soo aaddan ku biirayo Juventus isagoo yiri – “Ma dookh xuma…”
Laacibkan Lyon ayaa si isa soo taraysa loola xiriirinayaa kooxda Marwada Gabowdey ee Bianconeri, isagoo maanta loo magacaabay xulka Les Bleus oo kulankii 1-aad loogu yeerey.
“Miyuu Tolisso dookh wanaagsan u noqon lahaa Juve?” ayuu is waydiiyay Deschamps, oo laacib iyo macallinba usoo noqday Old Lady 
Waqtiyada la ciyaaro horyaalka Talyaaniga oo isbedello rasmi ah lagu samaynayo
(Roma) 16 Maarso 2017 – Sida ay werinayso mareegta premiumsporthd.it, kaddib markii maalin dhowayd la guddoonsadey in fasaxa Easter-ka la dheelo Derby Milano oo lagu beegay xilli aan horay loo ciyaari jirin si ay ciyaartan u daawadaan taageerayaasha ku nool Bariga Fog lagana dhigay 12:30 duhurnimo waxaa mar kale la kacaaminayaa waqtiga la ciyaaro ciyaaraha Talyaaniga.
Hay’adda maamusha ciyaaraha Talyaaniga ee Lega Serie A ayaa daraasadayn ku wadda inay waqtiga wax ka bedesho si rasmi ah iyadoo awal waqtiyada qaar 
RASMI: Luciano Moggi oo markale ku guul darraystay rafcaan uu ka qaatay xukunkii Calciopoli
(Napoli) 16 Maarso 2017 – Rafcaankii uu Luciano Moggi ka qaatay mamnuuciddii laga saaray inuu gebi ahaan inta uu nool yahay uu ka qayb qaato ciyaaraha iyo maamulkooda ayaa si kama dambayn ah loo diidey.
Maareeyihii hore ee ciyaaraha Juventus ayaa loo diidey rafcaankiisii ugu dambeeyay ee kubadda xirfadleeyda kaddib ku lug lahaanshihiisii fadeexaddii Calciopoli.
Moggi ayaa markii uu ku guul darraystay rafcaanka maxkamadda cadaaladda isboortiga wuxuu kiiskiisa la ciirsaday maxkamadda caadiga ah ee Consiglio di Stato.
Yeelkeede, maxkamadda ayaa u dayrisay iyadoo 